A mega rental housing project kicked off in South Dagon | Myanmar Business Today
HomeBusinessA mega rental housing project kicked off in South Dagon
Daw Aung San Suu Kyi at the groudbreaking ceremony of the housing project
The State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi attended the groundbreaking ceremony for the rental housing project at the special agricultural zone in South Dagon Township, Yangon.t
Over 200 companies led by three construction associations will develop this mega project aiming to satisfy the surging housing demands and to help in-service and retired officers and low-income families.
The government is also planning to develop around 10,000 housing units in major cities such as Yangon, Mandalay, and Naypyidaw.
Coupled with internal migration and expansion of household size, it is estimated that the aggregate housing shortage in the Yangon Region will be 1.3 million units by the year 2030. To meet the present and future demand for affordable housing, the public and private sectors need to augment their capacity to deliver an average of 100,000 housing units per year over the next 12 years
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်၊ စံပြစိုက်ပျိုးရေး အထူးဇုန်တွင် တည်ဆောက်မည့် ပြည်သူများအတွက် အငှားအိမ်ရာ စီမံကိန်း ပန္နက်တော်တင် ခဲ့သည်။
ပြည်သူများအတွက်အငှားအိမ်ရာစီမံကိန်းမျာတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း ၃ ခုမှ ကုမ္ပဏီ ၂၀၀ ကျော်က ပါဝင်ပြီး တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဝန်ထမ်းများ ၊ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ၊ ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများ နေရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပြည်သူ့အငှားအိမ်ရာများကို တည် ဆောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အငှားအိမ်ရာများတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများလည်း ရရှိများစေမည်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေထူထပ်သော ရန်ကုန် မန္တလေး နေပြည်တော် တို့တွင်လည်းအငှားအိမ်ရာအခန်းပေါင်းတစ်သောင်းခန့်ဆောက်လုပ်မည်ဟု သိရသည်။
အငှားအိမ် ယာများတည်ဆောက်သောအခါတွင် ရေ လျှပ်စစ်မီး လမ်းများအပြင် ကျောင်း ဆေးခန်း အားကစားကွင်းများပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Previous articleGovt to provide financial aids to pregnant mothers
Next articleMCPA to organizeaCIO/CTO Online Conference